Daawo Sawirada :Warbaahinta oo hadal heysa Madaxweynaha Cusub ee France oo Guursaday Macalimadiisi. |
Daawo Sawirada :Warbaahinta oo hadal heysa Madaxweynaha Cusub ee France oo Guursaday Macalimadiisi.
Daawo Sawirada :Warbaahinta oo hadal heysa Madaxweynaha Cusub ee France oo Guursaday Macalimadiisa..09.05.17
Hadal heeynta ugu badan warbaahinta Caalamka ayaa noqotay Madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Faransiiska Mr.Emmanuel Macron oo Xaaskiisa aad uga da´weyn tahay taas oo ahaan jirtay Macalimadii Iskuulkiisa .
FRANCE PRESIDENTIAL ELECTIONS CAMPAIGN
Madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Mr.Emmanuel Macron waa 39 jir guursaday haweeneyda lagu magacaabo Brigitte oo iyana 64-jir ah . Labadaaan lamaane ayaa jaceylkoodii kowaad jilay Emmanuel Macron 17-jir ahaa iyo Xaskiisa Brigitte oo xiligaas 41-jir eheed .
Madaxweynaha dalka Faransiiska ee dhawaan xilka jagada dalkaas la wareegi doona Mr.Emmanuel Macron ayaa xaaskiisa Brigitte wuxuu guursaday sanadkii 2007 waxeeyna horay u soo noqotay Macalimadiisa qaaska ah ee Iskuulka .
Mr.Emmanuel Macron ayaa soo noqday Wasiirka Maaliyada dalka Faransiiska , wuxuuna xilkaas hayay intii u dhaxeysay sanadihii 2014-tii iyo 2016-ka .
Siyaasigaan oo ah rug cadaa da´yar wuxuu iminka codad iskoor ah kaga guuleysay haweeneyda hogaamisa xisbiga Cunsuriyiinta Marine Le Pen kaas oo helay codadkii la qaaday 65% , waxeeyna Marine Le Pen oo aad u niyad jabtay heshay kaliyah 35% .